Nzuzo mara mma nke Chocolate - AFRIKHEPRI
A mụrụ 'Chukwu' na Afrịka
Vma ọ bụ ruo ọtụtụ afọ m nwere obi amamikpe ruo ọtụtụ awa obere oge m na-etinye ezé m na friji chọkọletị. Otu nkata zuru ụwa ọnụ abanyela na ụbụrụ m na "chọkọletị na-enye ihe otutu", ka ọ ghara ịkọ maka calorie, cholesterol na oghere. Oge erugo izopu ihe mgbochi; ọ bụrụ na ịchọ mma chọkọleti na-apụta n'ụlọ ebe a na-ere ọgwụ, ikekwe ọ bụghị ihe ọjọọ.
Nzuzo nke osisi osisi
Mgbe anyị na-ekwu okwu banyere chocolate, anyị na-ekwu okwu banyere koko, ma ka anyị chee ihu, okwu ahụ bụ "chocolate" bụ ihe na-adọrọ mmasị ma na-atọ ụtọ karịa "koko". N'ihi ya, Coc jupụtara na vitamin A, B, C, E na mineral - potassium, magnesium, ígwè, calcium na ọla kọpa. Um, gịnị mere na anaghị m eri chocolate? Oh ee, ihe otutu ...
Taa, ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ ka ha jikọta chocolate n'ime nri kwa ụbọchị, otu ndụmọdụ: emela ihe ọjọọ. Na nke a bụ nanị ihe ize ndụ nke chocolate; ozugbo ị malitere, ọ ga-esi ike ịkwụsị.
Ntị! A naghị atụ aro chocolate maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site n'oké ibu (oke oriri) ma ọ bụ ọrịa shuga (oke shuga na abụba). N'aka nke ọzọ, ọ dị mma nye ndị na-eso nri nri hypocaloric: nke a na-ekwu ngwa ngwa, chocolate na-ezigara ụbụrụ ngwa ngwa nke ihe ụtọ na satiety nke na-egbochi nhụsianya n'ihi ohere ndị ọzọ. Ikwesịrị ịmara na chocolate nwere ọchịchịrị dịtụ ala, nke ahụ bụ ikwu na ọ na-eme ka shuga dị n'ọbara na-adịgide adịgide ma si otú ahụ na-egbu oge ịchọta agụụ.
Chocolate jupụtara ezé
O nwere ike ịchọta ya dị mwute, mana na nchọpụta sayensị kachasị ọhụrụ, mmeri nke "Unu erila chocolate, ị ga-enwe cavities", ị pụghị ime ya na ezi okwukwe na ụmụ gị: ndị tannins nọ na koko na-enyere aka igbochi cavities site na ibelata ugbo. Gini mere Colgate anaghị eji ihe nkocha chocolate?
A obere chocolate, ọtụtụ ọchị
Coca nwere caffeine - ugboro iri na-erughị kọfị, Otú ọ dị - na theobromine, ihe ọzọ na-akpali akpali. Ihe abuo abuo a, nke di na obere onu ogugu, nwere mmetuta na-akpali akpali na nsi, nke nwere ike bara uru n'oge ule ma obu oru siri ike. Oke nwere ihe nwere ike ime (theobromine na serotonin) na-egbochi iwe na nsogbu. A na-ekwu na chocolate nwere mmetụta na-emenye ihere na iji kpughee mmetụta nke euphoria; anyị amaghị n'ezie ma ọ bụrụ na mmetụta ndị a na-adabere na chocolate onwe ya ma ọ bụ mmetụta ọ na - akpata, mana ọ dịghị mkpa. Mmasị nke iri chocolate na-eme ka ebili na endorphin, hormone ahụ na-atọ ụtọ, ma na-ewepụ ịda mbà n'obi na nchekasị. E wezụga nke ahụ, naanị ịbanye ụlọ ọrụ kọlịlị, ị na-enwe mmetụta ugbu a!
O nwere ike iyi ihe dị egwu, mana chocolate nke ị na-ebo ebubo maka nsogbu niile nke agịga na ọnụ ọgụgụ gị nwere n'ime ya ingredient anwansi maka nọmba gị: caffeine. Ọ na-ebelata cellulite, na-eme ka akpụkpọ ahụ na-ehichapụkwa onyinyo nke peel.
Chocolate creams maka akpụkpọ gị
Kwụsị nọmba # 1: A na-akpata acne site na ihe omume hormonal, ọ bụghị iji oke chocolate. IGBU! Ah, lee ka o si dị mma ịnụ ozi ọma! Ọbụna m ka mma: egbugbere ọnụ dị na butter butter na-enye anụ ahụ aka, moisturize ma nyere akpụkpọ ahụ aka ịchịkwa, na-eweta nro na ncha. Coa nwere ihe ngwọta, dị irè karịsịa iji gbochie ma lụso ọgụ. Karịa tii a maara maka nnukwu ọdịnaya ya, koko bara ọgaranya na-emepụta ọgwụ polyphenols, bụ nke ndị na-emepụta ihe ịchọ mma na-eme ka ha ghara ịka nká.
Gosiputara uzommere chocolate maka anu aru
Ị chọrọ ... 2 square nke chocolate chocolate, na nke ahụ bụ ya! Kpachara anya, jiri ezigbo chocolate: jide n'aka na 100% ezigbo butter butter, na e nweghị ihe na-eme ka mmiri dịkwuo, ma họrọ ya nke ọma na oke pasent nke koko (80) %). Ịnwere ike itinye mgbakwunye nke mmanụ dị oké mkpa mmanụ mmanma. Kpoo chocolate n'ime bath-marie, ma kpoo ya iji nweta ezigbo mpe. Mee ka oyi ruo mgbe mgwakota agwa dị ọkụ, iji zere ịsa onwe gị ọkụ. Tinye ihu maka oge 20 ma kpochaa nke ọma. A na-azụ anụ ma na-eme ka ọ dịkwuo mma
Mma na koko ahịa
Ọtụtụ ndị ọzọ na-eduzi ụdị ịchọ mma dị iche iche na-emepụta akpụkpọ anụ na-emepụta koko. The Beauty Shop, Sephora, Sensation Chocolat ... E nwere ọbụna chocolate mma na ngwaahịa na ụlọ ahịa shelves! Ahịa ahịa ga-abụ ihe na-ezighị ezi iji gbochie onwe ha; a na-eji ndị ahịa na-elekọta ụmụ nwanyị gọọmenti ebubo ma na-eri ihe ndị a.
Ebe ọ bụ na sayensị egosila na ọ na-ewute chocolate, ụfọdụ spas na thalassotherapy etinyekwuo nlekọta ha. Nke a bụ otu esi eji ejiji ọhụrụ: ọgwụ chocolate. Ọ bụ uwe na ịhịa aka n'ahụ na-ahụ na a chocolate egbupụsị nke, jikọtara na mkpa mmanụ, banye ị n'ime ufiop ọdịmma, na-akpọte gị mmụọ, na icing na achicha (na chocolate N'ezie) na-eme ka gị akpụ akpụ. Taa, ihe karịrị 200 institutes na France omume nke koko mma: n'ebe bụchaghị gị nso. Gwa m ma ọ bụrụ na ị nwalere otu, ọ bụghị ịkọ aha na adreesị ọ bụrụ na ọ dị mma!
Cocoa Butter 100g - 100% dị ọcha na eke - enweghị nkọwa - kacha maka akpụkpọ - ntutu - ihu - anụ ahụ - mgbochi Wrinkles - Ezigbo mma maka mma - izu ike - ịhịa aka - SPA - karama
11,99€ dị na ngwaahịa
1 ọhụrụ site na 11,99 €
dị ka Mee 26, 2020 3:43
Mmanụ cocoa bara ụba na vitamin, mineral, micro na ihe ndị na-enweghị ike dochie ya n'oge nlekọta ọ bụla. 100% bọta koko dị ọcha bụ nkwa nke ịma mma na ọdịmma. , ntutu na ahụike mara mma, Ihu na Ahụ dum!
Butter koko, ezigbo aru maka aru, mbọ, egbugbere ọnụ, ntutu, ihu, ahụ, isi, ọgaranya na abụba na vitamin, Otutu, Ihe Ngbo, Nko, ori. wrinkles, Megide agbatị akara, jiri dị ka onye nnọchianya dị ọcha, mmanụ dị oke mkpa, dị mma maka ịdị mma na ịdị mma.
Ojiji nke akpukpo ahihia akpukpo aru bu ezigbo aru maka aru gi, ahu ike gi, iru ya, ntutu gi, aka ya na ukwu gi, ya na aru ya. iji rụọ ọrụ ịchọ mma (cosmetology) na aromatherapy.
Mmanụ na-enweghị ihe ndị mejupụtara ihe eji eme ihe, ihe eji echekwa, ọnya! Naanị 100% mmanụ mmanụ dị ọcha.
100% nchedo eke mara mma na ahụike gị. Mee nhọrọ dị mma!
Ọchịchịrị gbara akpụ: esi achọta ntọala dị mma?
Azụ azụ ma ọ bụ nkà nke afụfụ Afrika